यी हुन् सरकारले गरेका उल्लेखनीय कार्य (प्रम ओलीको सम्बोधनको पूर्णपाठसहित) — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > यी हुन् सरकारले गरेका उल्लेखनीय कार्य (प्रम ओलीको सम्बोधनको पूर्णपाठसहित)
यी हुन् सरकारले गरेका उल्लेखनीय कार्य (प्रम ओलीको सम्बोधनको पूर्णपाठसहित)
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आफू नेतृत्वको सरकारले २ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रतिनिधिलाईलाई विशेष सम्बोधन गर्नुभएको छ ।
सम्बोधनका क्रममा ओलीले सत्ता सञ्चालनको ७ सय ३१ दिनमा सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको दावी गर्नुभएको छ ।ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको बताउनुभयो ।
यस्तै ३ हजार ५ सय ७८ किमी सडक ग्राभेल सडक निर्माण भएको, ३ सय २५ सडक पुल निर्माण भएको र यो वर्ष मात्रै ४० पुल बनेको ओलीको भनाइ छ ।
६ सय भन्दा बढी तुइन विस्थापन भएको तथा अब डेढ दर्जन हाराहारीमा तुइन विस्थापन गर्न बाँकी रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै ओलीले विश्वमा तीब्र आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरिरहेका देशहरु मध्ये नेपाल उत्कृष्ट १० भित्र रहन सफल भएको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले देशमा कोही बेरोजगार नरहेको बताउदै भन्नुभयो–‘श्रमशक्ति बढेको जतिलाई रोजगारी थपिएको छ । अहिले नयाँ बेरोजगार थपिएका छैनन । श्रम मन्त्रालयले अहिले बेरोजगारहरुको तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको छ ।’
उहाँले बैकहरुको शाखा ९ हजार ३ सय पुगेको बताउँदै सरकारले थालेको ‘खोलौं बैक खाता’ अभियान मार्फत डेढ लाख नयाँ खाता खुलेको प्रगति पेश गर्नुभयो ।
ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अब नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हैसियतमा रहेको बताएका बताउनुभयो ।
सरकारको २ वर्षे उपलब्धीबारे प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउने क्रममा उहाँले अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र सरकारको १४ अर्ब हाराहारी लगानीको साथ सम्पन्न हुने यो परियोजनाले राष्ट्रिय गौरव र महत्त्वको हैसियत प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको स्वीकार्यतामा कुनै समस्या नभएको बताउनुभएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बरु संविधानको स्वीकार्यता वर्तमान सरकारले विस्तार गर्ने काम गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान नमान्ने सीके राउत समूहलाई कानुनको दायरामा ल्याएको बताउँदै अन्य समूहलाई पनि यही बाटोमा ल्याउन सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभयो ।
आफू नेतृत्वको सरकारले विभिन्न ५५ वटा नयाँ कानुनहरु निर्माण गरेको, २०१ वटा ऐन संशोधन तथा १३ वटा ऐन खारेज गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा अग्रसर रहेको बताउनुभयो ।
¬– गतसाल यसैगरी बर्षभरिका कामको प्रतिवेदन यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउने प्रयास गरेको थिएँ । रणमा जान चाहन्नँ, तर संसद चलिरहेको बेला यसै गरिमामय सदनले अत्यधिक मतले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले, आफुलाई निर्वाचित गर्ने निकायलाई उसले गरेका कामको जानकारी गराउन पाएन । मैले सिंहदरबार परिसरभित्र सार्वजनिक समारोहबीच ३६५ दिनमा सरकारका तर्फबाट भए÷गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरेको थिएँ ।
– कमजोर टेकोमा अडेको अल्पावधिको सरकारले कार्यक्रमका रुपमा ‘केही लोक–रिभ्mयाँइका विषय र केही आफुलाई गर्न चाहेको ‘इच्छा–पत्र’ जस्तो क्षणिक लाभका कार्यक्रममा आपूmलाई केन्द्रित गर्छ । तर बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तात्कालिक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै थिएँ ।
त्यस सत्ताको समाप्ती र त्यसपछिको सत्ता कस्तो हुने भन्नेमा सल्लाह, बहस, बाझाबाझ र मारामारसमेत गरेका छौं । अन्ततः आ–आप्mना सहमति÷असहमतिसहित ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधानलाई मूल धुरी मानी हामीले यो नयाँ सत्ता निर्माण गरेका हौं । आजको ‘शासन प्रणाली’ स्थापना गरेका हौं । यो ‘शासन प्रणाली’ तीन दशक अघिको जस्तै ‘निषेध गर्नुपर्ने’ प्रणाली निश्चय नै होइन ।
– यसको अर्थ, हामीले श्रम वजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौ भन्ने हो । हाम्रो श्रम बजारमा जति जनशक्ति प्रवेश गर्छन्, त्यो श्रमशक्तिलार्ई नयाँ रोजगारीले भेट्ने भेट्ने स्थितिमा छ । श्रम बजारमा पहिले भएका बेरोेजगारले काम नपाएका होलान,् तर नयाँ वेरोजगार थपिएका छैनन् । अहिले बेरोजगारहरुको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयले संकलन गर्दैछ । विकास निमार्णकोे काममा श्रमिक अभावको स्थिति छ । यसको मतलब हो, आधारभूत तहमा रोजगारीका समस्याहरु क्रमशः हल हुँदै गएका छन् । हामीले थाँती रहेको पुरानो वेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनौं होला, तर श्रम बजारमा जति थपिएका छन्, तिनीहरुमध्ये अधिकांशलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौं । उपलव्ध जनशक्तिमा रहेको सीपको अभाव वा बेमेलका कारण जगेडा श्रमिकबीच अभावको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । जीवनपयोगी शिक्षाको अभावमा शिक्षा, रोजगारी, पेशा र व्यवसायसँग आर्जित ज्ञान जोडिन सकेको छैन । जसले एकप्रकारको शिक्षित/साक्षर वेरोजगारहरुको जमात पैदा हुन पुगेको छ ।
२०७६ फागुुण ३ गते १३:२० मा प्रकाशित
दुई वर्षमा सरकरले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभाव र परिचय विस्तार गर्‍यो : प्रधानमन्त्री ओली
भर्खरै आयो लिखित परीक्षाको नतिजा, यी हुन् उत्तीर्ण भएका उम्मेदवार (नामावलीसहित)
सानिमा बैंकको बचत खातामा महिलालाई विशेष उपहार
सवारी दुर्घटनामा मजदुरलाई मात्रै दोषी देख्नेहरु खबरदार !
नेपालको शिक्षामा लगानी गर्दै एडिबी, दिने भो १२ अर्ब ऋण !
ललितपुरको चिजवल फ्याक्ट्रीमा भिषण आगलागी